Nokuti vanhu vanoda mwero yemuraudzo, kugadzwa muenzaniso uye muenzaniso configuration of nepachinko yaiitirwa
トップページ ＞ 言語 ＞ ショナ語 ＞ Nokuti vanhu vanoda mwero yemuraudzo, kugadzwa muenzaniso uye muenzaniso configuration of nepachinko yaiitirwa
Muri, ndakaenda nepachinko yokumusoro, ndinofunga kuti pakusarudza mutambo mienzaniso kutarira kutanga panguva yose chitoro. Saka, kana ukaedza kuhwina zviri, kana ndirege kuridza chero yokutevedzera, zvitoro chero muenzaniso kunovhengana acharamba kutarisa zvakanaka sei. Nepachinko chitoro, asi takashongedzerwa siyana yokutevedzera, chikamu kuti Ndinoda zvakanakisisa yekusimbisa zvikuru raparadza mukana.
ikozvino, nepachinko zvose slots, nokuti magazini wakabuda zvakawanda, edza kuona asati kuenda kunotamba.
nepachinko, kubva guru raparadza mukana anonzi mukuru-spec mukuru yokutevedzera, akasiyana-siyana kusvikira muenzaniso rakadzika mukana kuti hunonzi Dejihane. Nokuti slots, maererano ezvinhu, pane mukana kuti anonzi zvokuimba paradzanisa.
kubudikidza zvaunoda kuti sei kutamba nomutsa, I kusiyana mienzaniso kusarudza anobuda, zvavakabvumirana mukana yakanakisisa nepachinko muenzaniso iyo anonzi pakati mhando Specs. Middle mhando nokurondedzerwa, vaizova pagungano zvenguva nzvimbo jackpot mukana mukuru-spec uye Dejihane.
Dejihane zvakakwana, asi hapana nyore kuti varove, sezvo mukuru-spec, kwete kunyange zvakasimba mugove muropa zviri, ndinoreva kuti mari iri shoma kare, uyewo anokunda kutarisirwa ari nepachinko. Zviri guru takunda nawo kana mukuru-spec inokurudzirwa, asi kubva muropa kuri guru, pane mukana kuti mari rinobuda kuzvimba guru, unodiwawo unoda hombe kukundwa.
Dejihane uye kutaura, jackpot richanyura pakarepo, asi payout muduku uye akanaka kana kuti chinangwa kutamba, hakusi akakodzera kana uchida kuhwina.
By munzira, slots iri rinenge kuisa 1 patafura nepachinko yokumusoro. Panewo kuda kana zvenguva pazviruva vari akapindawo motokari dzakawanda kuitira kuti aratidze kuti bhora kunze, asi kuisa 6, ndinofunga zviri nani kuti ndakafunga zvishoma akapindawo inowanzotorwa mabhizimisi.
Naizvozvo, kufunga ndicho muchina akatsemura panyaya yokumisa 1. The pedyo muchina basa 100 muzana yakatarwa 1, zvichava nyore kudhonza mubhizimisi yakawandisa zvishoma bhonasi. Kuwedzera slots, A T muchina uye ART muchina uye zvisingatomboiti muchina, kana zvakadaro, uyewo anobuda musiyano pakati Specification. The dzose muchina, achifumira vane RT basa, muchina kutsemura pakati munzira imomo zvinoiswa 1, pane zvinoitwa zvishoma yepamusoro.
nokuti beginners ndechokuti, zvakajairika muchina hakusi Specification of RT, etc. pasina hwokugadzira kupindira akadai kusunda ziso inokurudzirwa. Nepachinko zvose slots, asi hapana nzira dzakadai zvirokwazvo kuhwina, zvinoda zvishoma mari, zvakakosha kusarudza mutambo nyore kuti zvinoedza Unobata uyewo kutarisirwa. Kubva pakati
kutamba nyore wokuenzanisira verenga nefungu muchina iri date rambi, uye kuziva chimwe mari, uyewo izvozvo kuchawedzera kuhwina kwako chikamu pane tinongoita kutamba. Pashure paizvozvo, uye muenzaniso avo dzakakundwa kare, kana Hendei akasarudzwa pamwe mienzaniso kuti ndinoda kutamba, ndinofunga kana kwete mberi kunakidzwa nepachinko.
Kana uchida kubenzi, sarudza muchitoro kugadzwa pakati mhando Specs kazhinji, panyaya apo slots, kusarudza chitoro wako kuisa 1 muchina vakakamukana kune mienzaniso yakawanda pedyo 100%, kunakidzwa siyana yokutevedzera Ndapota tarisa mukati.
kuhwina zvakare zvinokosha, asi wemanomano kuti zviri dema nechiedzo usingabereki kurasikirwa zvakare. Kana uri yepamusoro User, ndinovimba kunyange kana zvainanga mukuru-spec kutarisirwa zvakanyanya, vanhu vanoda kubatsirwa nguva yokuva nomwero, Zvinokurudzirwa kuti iwe famba musoro kuti murege kurasikirwa kupfuura takunda. Uye mhando kuti ati akunda kare, kana Hendei akasarudzwa pamwe mienzaniso kuti ndinoda kutamba, ndinofunga kuti zvaizova zvimwe kunakidzwa nepachinko.
kuhwina zvakare zvinokosha, asi wemanomano kuti zviri dema nechiedzo usingabereki kurasikirwa zvakare. Kana uri yepamusoro User, ndinovimba kunyange kana zvainanga mukuru-spec kutarisirwa zvakanyanya, vanhu vanoda kubatsirwa nguva yokuva nomwero, Zvinokurudzirwa kuti iwe famba musoro kuti murege kurasikirwa kupfuura takunda.